Matongerwo eNyika, 01 Chikunguru 2018
Svondo 1 Chikunguru 2018
Chikunguru 01, 2018
Russia Yoburitsa Spain Mumakwikwi eWorld Cup
Russia yakashura mare mumakwikwi eWorld Cup apo yakarova Spain 4-3 mumapenalties mushure mekuita mangange-1-1.
VaChamisa Voshora Hurumende neKutumira Vakuru Vakuru Kunorapwa Kunze
Mutungamiri weMDC Alliance VaNelson Chamisa vashora zvikuru tsika yehurumende yekuenda kunorapwa kunze kwenyika vachisiya varombo vachiyaura munyika nekuti havana mari. VaChamisa vakataura mashoko aya kuMvurwi, Mashonaland Central uko vange vachiita musangano nemusi weSvondo.
VaMnangagwa Vopinda Mumusangano weAU kuMauritania
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano weAfrican Union kuNouakchott, kuMauritania uyo wakanangana nenyaya dzerunyararo.
Chikumi 30, 2018
VaMusendekwa Vovimbisa Hupenyu Hunotapira kuVagari vekuGutu South
Vachitaura pamusangano waitirwa paPengaudzoke muGutu South, vari kumirira MDC Alliance musarudzo yemumiri weGutu South muparamende, VaErium Musendekwa, vati hurumende yaVaNelson Chamisa ichapedza hurombo huri kuvhiringa hupenyu hwevanhu vari kumaruwa.
VaChiwenga Vovimbisa Kusimudzira Nzvimbo yeArcadia Vachiti Yakasarira Zvikuru
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, vanoti hurumende iri kuronga zvekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushaikwa kwemari munyika.
Vari Kupomerwa Mhosva yeKubhomba kuWhite City Stadium Vanomiswa Mudare
Vanhu vaviri vari kupomerwa mhosva ine chekuita nekuputiswa kwebhomba kwakaitika muWhite City stadium kuBulawayo svondo rapera, vamiswa pamberi pedare muBulawayo vachipomerwa mhosva yekuita zvegandanga pamwe nekuda kupidigura hurumende..
Chikumi 29, 2018
VaMnangagwa Vanomutsiridza Chibvumirano cheKudyidzana kweZimbabwe neTanzania
Mutungamiriri wenyika Va Emerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi masikati mushure mekushanya ku Tanzania kwemazuva maviri. VaMnangagwa nemutungamiri weTanzania, vaJohn Magufuli vakanyorerana chibvumirano chekudyidzana kwenyika mbiri idzi.
ZEC Inotanga Kudhinda Magwaro eKuvhotesa Vemapato Anopikisa Vachinyunyuta
Zimbabwe Electoral Commission neChishanu yatanga kudhinda mapepa ekuvhotesa kukambani yeReserve Bank, yeFidelity Printers, mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiratidza kusagagutsikana nekudhindwa kwemapepa aya.
Vanhu Vashanu Vanosungwa Mushure meKuratidzira paChitoro cheTM Pick n Pay kuBulawayo
Vanhu vashanu vasungwa mushure mekuratidzira kwaitika panze pechimwe chezvitoro zvikuru muBulawayo neChishanu masikati mushure mekuratidzira kwedzimwe nhengo dzebato reMthwakazi Republic Party panze pechitoro chikuru cheTM Pick n Pay Hypermarket muBulawayo.
VaMugadza Vari Kukwidza Musarudzo dzeMutungamiri weNyika Vanoti Vakatozodzwa Hutungamiri neDenga
Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mutungamiriri webato, reBethel Christian Party, VaWillard Taonezvi Mugadza, ndemumwe wevanhu vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Dr Mugadza vanoti kana vakakunda hurumende yavo ichange iine makurukota gumi nemaviri chete.
VaMugadza Vari Kukwidza Musarudzo dzeMutungamiri weNyika Vanoti Vakatozodzwa Hutiungamiri neDenga
Nyanzvi Yoramba Nyaya Yekuti Hupfumi hweZimbabwe Huchakwira Zvakanyanya
Sangano rezvehupfumi kuchamhembe kweAfrica, reMacroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, (MEFMI) rinoti hupfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukura nezvikamu zvina zvine chidimbu kubva muzana (4.5%) mugore rino ra 2018 nekuda kwechivimbo chitsva munyaya dzezveupfumi chakaunzwa nehurumende itsva yave kutonga.